Khariidaddu waxay ku xirantahay Manifold - Geofumadas
Map Suite ayaa ku adkeysanaya si ay uga hortagaan Manifold
Abriil, 2008 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
In muddo ah hadda, Manifold GIS ayaa soo galay suuqa, iyada oo qaar ka mid ah tixraacyo wanaagsan laga helay adeegsadayaasha aadka loo kalsoonaan karo sida James Fee. Iyo maalmo uun ka dib shirkii bariga ee isticmaaleyaasha Manifold, markii qoraalka erayga "Manifold GIS" lagu soo dejiyey Google, aalad ayaa u muuqata mid loo soo bandhigayo sida bedelka Manifold, tanina waa Khariidadaha Maqaarka.
Gaar ahaan, waxay iila muuqataa inay tahay ikhtiyaar fiican oo ku saabsan horumarinta shatiyada laysanka, laakiin waxaan shaki ku qabaa shaqada miisaska. Aynu eegno.
1 Tartanka adeegga (Waa la ansixiyay)
Manifold waxay leedahay hab caqli gal ah oo lagu gado, waana wax aadan soo degsan karin nooca tijaabada ah ee maalmaha 30, laakiin waa inaad ku iibsataa dammaanad qaadka in haddii maalmaha 30 aadan ku qanacsanayn ay soo celin doonaan lacagta. Laakiin dad badani ma jecla sidan, markaa Map Suite waxay bixisaa nooc tijaabin ah maalmaha 60 ... ma xuma, marka laga reebo xaqiiqda ah in Manifold taageerooyinka taageero la bixiyo, $ 20 su'aal kasta ... oo aan aad u waydiin waqti ka waqti Waxay ku jiraan xaalad xun.
2 Waxqabadka (mmm…)
Uma muuqato xumaan Khariidad Xun, kaas oo bixiya aalado kala duwan labadaba adeegsade laakiin badiyaa u ah soosaarayaasha. Waxaan hore u arki karnaa mahadnaqyada James Fee Chris C, maxaa yeelay wuxuu sheegay inuu soo dejiyay si loo tijaabiyo.
Input waxay kubixinaysaa aalado loogu talagalay Pocket PC, desktop iyo websaydh, ka dibna qaybo ka mid ah horumarinta adeegyada webka iyo geocoding. Jaantuska Nice laakiin waa inaad raadisaa fududeyn, maxaa yeelay taasi waa sida xaashiyaha buug-yaraha ah ee ESRI ay yihiin illaa aad rabto inaad wax weyn qabatid waxayna bilaabayaan inay kuu sheegaan inaad tahay inaad iibsato kordhin dheeraad ah.
Qaab-dhismeedkuna wuxuu ku salaysan yahay ugu yaraan 4 heerkulbeegga iyo inkasta oo aysan fududeyn in la isbarbardhigo dabeecadda su " qiyaasta ee ESRI, aynu ka aragno iyada oo laga eegayo aragtida user ee u baahan shaqooyin gaar ah:
Samee shaqada GIS shaqo, Map Suite Desktop. Tani waxay u dhigantaa ArcView Desktop $ 1,500, ama waxa aan ugu yeeri lahaa Manifold Personal $ 245 (ma aha kartida, laakiin fikradda)
Khariidada Muuqaalka Mashruucan waa qiimihiisu $ 4,995 ... chanfle!
Daabacaadda adeegyada khariidada, Map Web Suite. Waxa u dhigma ArcIMS $ 7,000 o Manifold Professional $ 295
Khariidadda Webka Suudaantu waa qiimihiisu $ 4,995 ... kuwa kale !!!
Sameeya codsiyada, Map Suite Engine. Waa u dhigmaa ArcGIS Engine ama Editor Editor $ 7,000 o Shirkadda Manifold $ 395 (... ma aha mid u dhigma awoodda)
Khariidadda Mashiinka Suuliga waa qiimihiisu $ 4,995 ... kuwa kale oo badan!
Codsiyada PDA, Map Suite Pocket PC, ama u dhigma ArcPAD, Manifold ma laha wax u dhigma tan, sida muuqata.
Khariidadda Pocket PC Suite waa u qalantaa $ 4,995
Waa wax xiiso leh liisanka qaybinta, taas oo ah, haddii aad sameysid codsiyo leh mashiinadan uma baahnid inaad bixiso liisanka runtime sida waa kiiska Manifold iyo ArcGIS, oo ah miisaaniyada maamulka maareynta iyo sidoo kale videos Dibadbax
Waxay sidoo kale hubiyaan in qaybaha ay bixiyaan nadaafada. NET, qaybaha la saadaalinayo iyo in si fiican loo xakameeyo xirmooyinka xogta ba'an.
3 Qiimaha (Qalmitaanka)
GIS kala cayncayn ah Waxay leedahay faa'iido ka mid ah inay noqoto mid ka mid ah qalabka ganacsiga ugu dhaqaalaha leh awood leh ku filan.
Laakiin qiimayaashaas, Map Suite ma ballanqaadi karto wax kasta,
Khariidadda Muuqaalka Mashruuca $ 4,995.00
Khariidadda Web Suudi $ 4,995.00
Khariidadda Mashiinka Mashiinka ah $ 4,995.00
Khariidada Pocket PC Suite $ 4,995.00
USA 2006 Xogta Degmadda $ 495.00
USA 2006 Xogta Gobol ahaan $ 495.00
Macluumaadka Dunida $ 695.00
Dabcan, taasi waa wax badan wuu ka jaban yahay ArcGIS Engine ama ArcGIS Server laakiin wali waxay yihiin kuwo la buunbuunsan oo qaali ah oo keliya lahaanshaha hal-ku-dhigga ah 'Microsoft Gold Certified Partner', wadarta haddii Microsoft lafteeda aysan dammaanad ka qaadin Windows Vista.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad soo dejiso qaybaha maxkamadaynta ee 60 maalmaha, waxay noo sheegi doonaan.
Oh, waan ilaaway, adeegu wuu ka fiican yahay Manifold, gabadh qurux badan ayaa toos u joogta, kana soo horjeedaa taageerada foosha xun ee foosha xun ee Manifold. Uma qalmin $ 4,995 dollars, laakiin waa qurux badan 🙂
Post Previous«Previous Ka sheekeynta kartoonka ... iyada oon erayo badan
Post Next Waxaan ka soo laabtay safarkaNext »
2 Jawaab ah "Map Suite ayaa kudheer ujeeda Manifold"
Waad ku mahadsan tahay Chris, isbeddelka uu sameeyay. Waxaa suuragal ah in lagala wareego hal ku dhigga 'James Free' oo leh 'James Fee'
Ha ka welwelin, kalluunkaaga Babel waa mid ka sii badan sidii aan isbartey ????
Chris C. isagu wuxuu leeyahay:
Anigu ma i sharfo James Fee, waxaan ahay Chris C.
Waan ka xumahay haddii taasi ay tahay Spanish-ka xun, waxaan isticmaalay kalluunka babel ????